C/kariin Guuleed “Dadka Kismaayo ayaa maamulka sameysanaya, waa inuu ku yimaado rabitaankooda” – idalenews.com
Wasiirka arrimaha gudaha iyo Amniga qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa mar kale ku celiyay siyaasada dowladda ee ku aadan maamul u sameynta gobolada dalka, xilli uu muran weyn uu ka taagan yahay arrinta Jubooyinka.
Isagoo wareysi siinayay Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da ayuu Wasiir C/kariin Guuleed ka dhawaajiyay in dowladdan aysan maamul u dhiseyn Kismaayo, balse ay tahay in maamulka uu ku yimaado rabitaanka dadka deegaanka.
“Dadka Kismaayo ayaa maamulka sameysanaya, waana inuu ku yimaado rabitaankooda”ayuu yiri Wasiirka arrimaha gudaha
Wasiirka ayaa sheegay in Mas’uuliyada dowladda ay tahay sidii ay u fududeyn laheyd, isla makaana kor ugala socon laheyd qaabka maamul loo dhisayo, isagoo soo hadal qaaday go’aankii golaha wasiirada ee ku aadan maamul u sameynta gobolada laga saaray Shabaab.
Golaha Wasiirada oo maalinta berri oo khamiis ah kulan ku yeelan doona Muqdisho ayaa ka doodi doona qorshaha maamul u sameynta gobolada iyo deegaanada laga saaray Shabaab, kaasoo howsheeda loo xil saari doono Golaha Wasiirada.
Hogaamiyaha Raaskambooni Axmed Madoobe oo shalay ka hadlay Kismaayo ayaa sheegay in maamul u sameynta Jubooyinka ay meel gabo gabo mareyso, isla markaana qorshihii IGAD soo waday uu hada meel wanaagsan marayo, isagoo dhaliilay go’aankii Golaha wasiirada.